Ny dian'ny mpivahiny: CURAÇAO SY JAMAÏQUE · déliremadagascar
AFD: SUNREF permet à la MCB Madagascar de soutenir les entreprises malagasy impliquées dans des projets éco responsables
ROCADE D’IARIVO: Un bel exemple de coopération entre Madagascar et France
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE : Fianakaviana 3000 hisitraka fanampiana avy amin’ny tetikasa Milofo
NINA NOVELAS, SPORT PREMIUM, M6 MUSIC: Ao anatin’ny bouquet Startimes 22.000 Ariary
Fetin’ny paska sy ny pentekoty : Nouveau arrivage ao amin’ ny Baolai
29 Martsa…Tolom-panafahana…Fisaonam-pirenena : « Mitomany valala » manoloana tsangambato isika
Ny dian’ny mpivahiny: CURAÇAO SY JAMAÏQUE
Socio-eco	 16 avril 2020 .
Avy any Azia atsimo atsinanana (Thaïlande sy Corée) dia hiverina any amy kaontinanta amerikana. Efa nivahiny tany Amerika avaratra (Etazonia indroa) sy Amerika atsimo (Brésil indroa) isika, ka ho any Amerika afovoany. Faritra ara-jeografia atao hoe «Caraïbes», na “La Caraîbe”, na “The Caribbean” (teny angalisy) no itondrana antsika. Hita ao ny tangoronosy (archipel) antsoina hoe “Les Antilles”. Nosy kely iray sy nosy salasalany iray hafa no itondrana antsika, dia Curaçao sy Jamaïque.
Efa voasoritra mialoha araka ny programan’ny Conseil Oecuménique des Eglises COE, atao hoe « Decade to Overcome Violence » DOV, na Taona folo handresena ny herisetra, ny hanaovana fivorian’ny EDAN (Ecumenical Disability Advocacy Network) any amy faritra Caraïbes/Pacifique. Fanomanana fivoriana amy faritra EDAN samy hafa eran-tany no antom-pivoriana tselika tany Curaçao. Fivorian’ny COE naharitra andro maromaro kosa no natrehana tany Jamaïque taona vitsy taty aoriana.
Any amy faritr’i Caraïbes no misy ny tangoronosy Les Antilles: ny malaza sy lehibe dia Cuba sy Haïti ary Saint-Domingue. Mbola mamaritra an’i Caraïbes koa ireo firenen’ny kaontinanta Amerika afovoany manamorona ny atsimon’ny ranomasin’ny Antilles: Venezuela, Colombie, Panama, ary koa ireo tany mamaritra ny andilantany (isthme) Amerika afovoany: Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belize na Honduras Britanniques.
Ny ampahan’i Mexique antsoina hoe Yucatan, tanjona saika nosy na presqu’île aty andrefana, ary any avaratra ny ilany atsimon’i Etazonia: Floride. Ny tangoronosy Bahamas, ireo Guyanes samy hafa mbola eo ambany zioga Eoropeana tandrefana (Holandey, Espaniola, Frantsay). Ambonin’izany rehetra izany ny ranomasina Caraïbes sy ranomasina Antilles ilany andrefan’ny ranomasimbe Atlantika.
Tsy dia lavitra ny faritra ara-jeografia Caraîbes ao avaratra atsinanany no misy ny tangoronosy malaza antsoina hoe Bermudes na Bermuda. Tsy vitsy amintsika no mahafantatra ny lazan’ny “Triangle des Bermudes” na “Triangle du Diable”, izay niteraka resabe sy angano aman’arira teo amy loza fifamoivoizana an-dranomasina sy an’abakabaka. Izay mpamaky Jean Bruce sy Josette Bruce tamy fotoan’androny koa dia mahatadidy tsara ilay lohateny malaza hoe: “Interlude aux Bermudes pour OSS 117”.
Razaka Manantenasoa Ralphine
AFD: SUNREF permet à la MCB Madagascar ...
ROCADE D’IARIVO: Un bel exemple de...
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE : Fianakaviana ...
NINA NOVELAS, SPORT PREMIUM, M6 MUSIC: A...
Fetin’ny paska sy ny pentekoty : Nouve...
RATSIRAKA Didier Ignace : Tsy maintsy il...
TRANO MANARA-PENITRA : Hisitraka tanana ...
GEOMETRES EXPERTS PRIVES DE MADAGASCAR :...
DOUANES MALAGASY : La brigade canine est...
AFD: SUNREF permet à la MCB Madagascar de soutenir les entreprises malagasy impliquées dans des projets éco responsables 13 avril 2021
ROCADE D’IARIVO: Un bel exemple de coopération entre Madagascar et France 7 avril 2021
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE : Fianakaviana 3000 hisitraka fanampiana avy amin’ny tetikasa Milofo 3 avril 2021
NINA NOVELAS, SPORT PREMIUM, M6 MUSIC: Ao anatin’ny bouquet Startimes 22.000 Ariary 3 avril 2021
Fetin’ny paska sy ny pentekoty : Nouveau arrivage ao amin’ ny Baolai 31 mars 2021
29 Martsa…Tolom-panafahana…Fisaonam-pirenena : « Mitomany valala » manoloana tsangambato isika 29 mars 2021
RATSIRAKA Didier Ignace : Tsy maintsy ilaina (?) 28 mars 2021
MUSICHALL APPLICATION: Mampihena ny “pirate” amin’ny sehatry ny zava-kanto - ewa.mg dans MUSICHALL APPLICATION: Mampihena ny “pirate” amin’ny sehatry ny zava-kanto
StarTimes amène le football au coeur des foyers africains - ewa.mg dans StarTimes amène le football au coeur des foyers africains
ANTOKO MFM: Miantso ny Prezidà Rajoelina hanangana governemanta manana fahefana feno - ewa.mg dans ANTOKO MFM: Miantso ny Prezidà Rajoelina hanangana governemanta manana fahefana feno
Toamasina II : Nanampy ireo mpamokatra voankazo sy legioma Ambatovy. - ewa.mg dans Toamasina II : Nanampy ireo mpamokatra voankazo sy legioma Ambatovy.
HAKANTO CONTEMPORARY: Mampiranty ireo sangan’asa mampiseho ny zava-mitranga ankehitriny - ewa.mg dans HAKANTO CONTEMPORARY: Mampiranty ireo sangan’asa mampiseho ny zava-mitranga ankehitriny